Radio Masti 87.9 MHz विमान दुर्घटनाअघि पाइलटले के भन्छन् ? यस्ता छन् ‘ब्ल्याक बक्स’ का रेकर्ड
‘ब्ल्याक बक्स’ कालो रंगको भएर भनिएको होइन । बरु यो बाकसको रंग चाहिँ कालो नभएर सुन्तले हुन्छ । सुन्तले रंगको डिब्बाको नाम ब्ल्याक बक्स राख्नमा पत्रकारहरुको भूमिका छ ।तर, मिडियामा यसको नामाकरण ब्ल्याक बक्सका रुपमा हुन थालेपछि यसले यही नामबाट अन्तरराष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाएको हो । एउटा बैठकमा एकजना पत्रकारले ‘दिस इज अ वण्डरफूल ब्ल्याक बक्स’ भनेपछि यसको नाम मिडियामा ‘ब्ल्याक बक्स’का रुपमा चर्चामा आयो र सुन्तले रंगको डिब्बालाई ब्ल्याक बक्सको नामले चिन्न थालियो ।
ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको आवाज सुखद हुने कुरै भएन । त्यो आवाज पक्कैपनि दुःखलाग्दो नै हुन्छ ।विश्वका विभिन्न ठाउँमा विमान दुर्घटना हुँदा के कस्ता आवाजहरु रेकर्ड भए ? मृत्युसँग साक्षात्कार गरिरहँदा पाइलटको मुखबाट कस्तो आवाज निस्कन्छ होला ? मनमा के कुरा खेल्छ होला ? यसबारे यहाँ हामीले विभिन्न वेबसाइटहरुबाट संकलन गरिएका केही भ्वाइस रेकर्डहरु प्रस्तुत गरेका छौंः७ मे १९६४प्यासिफिक एयरलाइन्स ७७३ मा एक प्यासेन्जरले दुई पाइलटलाई गोली हानेर मारे । साथै उनी स्वंम ककपिटमा पेस्तोल लिएर उभिए । केही समयपछि विमान क्यालिफोर्निया नजिकको पहाडमा जोतियो ।उक्त विमानको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको आवाज यस्तो थियो- ‘स्पिकरलाई गोली लागेको छ । मैले गोली ठोकें । म सहयोग गर्दैछु ।’
५ जुलाई १९७०एयर क्यानडाको उडान संख्या ६२१ पाइलटको गल्तीले ओन्टारियो एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भयो । त्यसमा १०९ यात्रु सवार थिए । उनीहरु कोही पनि बाँचेनन् ।उक्त विमानको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको अन्तिम शब्द थियो- ‘पिट…सरी ।’
२८ नोभेम्बर १९७९एयर न्युजिल्यान्ड ९०१ जहाज खराब मौसमका कारण माउन्ट इरेबसमा ठोक्कियो । उक्त विमानको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको अन्तिम शब्द थियो- ‘खासमा, म सही हालतमा छैन, हैन ?’
१३ जनवरी १९८२पाइलटको गल्तीले एयर फ्लोरिडा विमान वासिङटनको पोटोमैक नदीमाथि बनेको पुलमा ठोक्कियो । र, पानीमा खस्यो । त्यहाँ यात्रा गरिरहेका ७४ जना मानिस मरे । त्यस जहाजको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको आवाज थियो- ‘हामी तल झर्दैछौ…मलाई थाहा छ ।’
८ जुन १९८२ब्राजिलमा उत्रने समयमा फ्लाइट १६८ जहाज पहाडमा ठोक्कियो । त्यसमा यात्रा गरिरहेका १३७ जनाको मृत्यु भयो ।त्यहाँको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको अन्तिम आवाज थियो- ‘के..के भयो ? कुनै पहाड देखिँदैछ ..हैन ?’
२२ अक्टोबर १९८६मिडिया कम्पनी डब्ल्यूएनबीसीको हेलिकप्टर न्युयोर्कमा हडसन नदीमा खस्यो । त्यस दुर्घटनामा रेडियो ट्राफिक रिपोर्टर जेन डार्नेकरको मृत्यु भयो । त्यसमा रेकर्ड भएको अन्तिम शब्द थियो- ‘हामी पानीमा ठोक्किँदैछौं …पानीमा …..पानीमा ।’